Stake - jluis37.com
pengantar Final Euro dan Copa America 2020 telah ditetapkan, dan tidak ada tempat yang lebih baik dari Stake.com untuk memasang taruhan Anda! Dengan semua pasar yang Anda inginkan dan butuhkan, Stake.com menawarkan peluang dan promosi terbaik untuk final Euro dan Copa. Di kawasan Eropa, kami memiliki dua kekuatan besar Italia vs Inggris dalam apa
Nchịkọta Dịka oge ịgba egwu tenis nke 2020-2021 na-aga n’ihu, anyị gafere ugbu a n’ụlọ ikpe ahihia iji chọta onye mmeri ọzọ anyị ga-enweta. Wimbledon 2021 ga-abụ asọmpi mmadụ niile chọsiri ike, ma merie ya otu. Na-ewere ọnọdụ na anwụ na-acha na Wimbledon, UK, ahịhịa dị egwu bụ otu n’ime njem nleta kachasị ama
UFC Fight Night June 26 – Atụmatụ na amụma – Stake blog
Ndewo, na-alụ ọgụ Fans na anyị bụ azụ, ọzọ izu na ọzọ cracking abalị nke ọgụ na-atụ anya. Ndị agha a na-alụ ọgụ bụ ndị na-eso UFC na 2020 niile maara na ụfọdụ ndị na-ese okwu kachasị mma na-alụ ọgụ na kaadị a ma ọ bara uru itinye ya. Kaadị a na-ebu isi site
Ndewo, na-alụ ọgụ Fans na anyị na-ọzọ Las Vegas ọzọ pleasure ọgụ abalị kaadị t a izu ụka. Anyị enwetala ụfọdụ ndị egwuregwu na-atọ ọchị dịka Khaos Williams, Marlon Vera, na Korean Zombie na-alụ ọgụ na kaadị a bụ ndị na-enye ndị na-egwu ya ihe ngosi dị mma mgbe niile. E nwere ụfọdụ egwuregwu
N’oge Arizona, lụrụ ọgụ u N t anyị abịaghachila na PPV nwere nnukwu ihe jupụtara na njiri mara mma kachasị mman’izu ụka a. Kaadị a nwere atụmatụ ịkọgharị aha abụọ, anyị hụrụ ha abụọ na-akwụsị esemokwu,n’izu a anyị nọ ebe a iji dozie akara. Kaadị a na-egosipụtakwa nke mbụ-agba 5 na-abụghị aha na ọgụ
Na-alụ ọgụ Fans, anyị alaghachila mma ụlọ nke ndi-mo-, Las Vegas ọzọ ụtọ Struggling Night kaadị. Kaadị a nwere ihe egwuregwu na-atọ ụtọ ma mgbe ezumike nke izu 1 gachara, anyị niile ga-ahụ n’anya ịlụ ọgụ na ịkụ nzọ. Mgbe kaadị a gasịrị, anyị na-aga ozugbo na Arizona maka ịkwakọba UFC 263. Ọ na-atọ